ခန္ဓာကိုယ်လေးကို လှုပ်ကာ အမိုက်စားကကွက်လေးတွေ နဲ့ ကပြထားတဲ့ မတ်မတ်သင်ဇာ့(ဗီဒီယိုဖိုင်) – အနုပညာရပ်ဝန်း
အခုအခါမှာ မတ်မတ်သင်ဇာက သီချင်းလေးကိုခံစားစီးမျောရင်း အမိုက်စားကကွက်လေးတွေနဲ့ ကထားတာလေးကို ဗီဒီယို ရိုက်ထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။သင်ဇာက ခန္ဓာကိုယ်လေးကို လှုပ်ခါပြီး ဆွဲဆောင်မှုရှိရှိ ကပြထားတာဖြစ်ပါတယ်။ သူမရဲ့ကကွက်လေးတွေက အသည်းယား စရာကောင်းလောက်ပြီး အမိုက်စားဖြစ်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ သင်ဇာကတော့ အိမ်ထဲမှာပဲနေရင်း ပေါ့ပေါ့ပါးပါးဝတ်စုံလေးကို ဝတ်ထားပြီး သီချင်းလေးဖွင့်ကာ ပျော်ပျော်ပါးပါးကနေတဲ့ သူမရဲ့ ဗီဒီယိုဖိုင်လေးကို ပြန်လည်မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်နော်။
ပရိသတ်ကြီးရေ မင်းသမီးချောလေး သင်ဇာဝင့်ကျော်ကတော့ အနုပညာအလုပ်တွေကို ဆက်တိုက် လုပ်ဆောင်နေတာဖြစ်ပြီး သူမရဲ့ လူမှု ကွန်ယက်စာမျက်နှာမှာလည်း တစ်နေ့တစ်မျိုးမရိုးရအောင် ချစ်ပရိသတ်ကြီးအတွက် တင်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်။သင်ဇာက ဆွဲဆောင်မှု ရှိတဲ့ အလှအပတွေကို ပိုင်ဆိုင်ထားပြီး အမြဲတမ်း လှပနေအောင်လည်း Gym ကိုကြိုးစားကစားပါတယ်နော်။သင်ဇာ့ရဲ့ အလှအပတွေက တော့ အမြဲတမ်းမြင်နေရလည်း မရိုးသွားဘဲ တစ်နေ့ထက်တစ်နေ့ ပိုပိုလှပနေတာဖြစ်ပါတယ်။
သင်ဇာဝင့်ကျော်က ကြော်ငြာတွေလည်းအများအပြားရိုက်ကူးနေရပြီး အလုပ် ကိုလည်း အရမ်းကြိုးစားပါတယ်နော်။သင်ဇာ့ကို ချစ်ခင် အားပေးကြတဲ့ပရိသတ်တွေကတော့ သူမရဲ့လှုပ်ရှားမှုတိုင်းကို အားပေးဝန်းရံနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။အခုဆိုရင်လည်း သင်ဇာက သီချင်း လေးကိုခံစားစီးမျောရင်း အမိုက်စား ကကွက်လေးတွေနဲ့ ကထားတာလေးကို ဗီဒီယိုရိုက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။သင်ဇာက ခန္ဓာကိုယ်လေး ကို လှုပ်ခါပြီး ဆွဲဆောင်မှုရှိရှိ ကပြထားတာဖြစ်ပါတယ်။
ပရိသတ်ကြီးရေ မင်းသမီးချောလေး သင်ဇာဝင့်ကျော်ကတော့ အနုပညာအလုပ်တွေ ကို ဆက်တိုက်လုပ်ဆောင်နေတာဖြစ်ပြီး သူမရဲ့လူမှု ကွန်ယက်စာမျက်နှာမှာလည်း တစ်နေ့တစ်မျိုးမရိုးရအောင် ချစ်ပရိသတ်ကြီးအတွက် တင်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်။သင်ဇာက ဆွဲဆောင်မှု ရှိတဲ့ အလှအပတွေကို ပိုင်ဆိုင်ထားပြီး အမြဲတမ်းလှပနေအောင်လည်း Gym ကိုကြိုးစားကစားပါတယ်နော်။သင်ဇာ့ရဲ့ အလှအပတွေက တော့ အမြဲတမ်းမြင်နေရလည်း မရိုးသွားဘဲ တစ်နေ့ထက်တစ်နေ့ ပိုပိုလှပနေတာဖြစ်ပါတယ်။
Posted by Storydaily on Wednesday, August 12, 2020
When I heard my favorite song ? :me ?#dancing #stressrelease #kindaboredlol? #thinzarwintkyaw??
Posted by Thin Zar Wint Kyaw on Tuesday, August 11, 2020